I-Vivo Xplay7, iselfowuni yokuqala enomfundi weminwe phantsi kwescreen | Iindaba zeGajethi
I-Vivo Xplay7, iselfowuni yokuqala enomfundi weminwe phantsi kwesikrini
Inkampani yaseTshayina iVivo icacile: ufuna ukuba luphawu lokuqala lwefowuni olubekekileyo ukubeka umfundi weminwe endaweni eyahlukileyo. Nokuba i-Samsung okanye i-Apple khange bakwazi ukuza nesisombululo okwangoku. Kwaye ngelixa i-Samsung ipatent isisombululo esitsha sayo esilandelayo Samsung Galaxy S9, Ukubheja kweApple kwinkqubo yokuvula i-ID yobuso.
Nangona kunjalo, ukubheja kweVivo kwesinye sezisombululo esasivakala ngokungaphezulu phezulu kuluhlu lweempawu eziphambili: ukubeka umfundi weminwe phantsi kwesikrini. Sele ngoJuni inkampani yaseAsia isungulwe kwisitishi sayo seYouTube (uya kuyibona ividiyo emva kokutsiba) ividiyo ekuyo ibonise ukusebenza kwenye yeekhompyuter zayo kunye nalo mfundi ubekwe ngasemva kwescreen. Ngelixa elizayo efowuni eziza kuphumeza obu buchwephesha yiVivo Xplay7.
Iselfowuni ivele kwifayile ye- Inethiwekhi yoluntu yeWeiboo kwimifanekiso yokwenene. Kuyabonakala ukuba IVivo Xplay7 iya kuba siselfowuni engenachaphaza ene-chassis encinci kakhulu kwaye ngokufanelekileyo, umfundi weminwe uya kufakwa kwiscreen. Kwangokunjalo, icandelo lokufota liza kuba neenkwenkwezi ngeSony sensor ezimbini kunye ne-4x zoom zoom, ngelixa intliziyo yazo zonke ezi zixhobo ishukunyiswa yi-chip entsha yeQualcomm, Snapdragon 845. Ukukunika umbono: yiprosesa enye ekucingelwa ukuba idityaniswe kwiGalaxy S9 elandelayo.
Okwangoku asazi ngokuqinisekileyo ukuba iya kufumaneka nini le mobile mobile yaseAsia, kodwa Ewe, iVivo Xplay7 kulindeleke ukuba ivele kwintengiso kunyaka olandelayo we-2018. Ukuba i-Samsung ayitshintshi ingqondo yayo kunye ne-iPhone 9 elandelayo-okanye i-iPhone 8S-ayibhejeli kule teknoloji, iVivo iya kuphakama njengowokuqala ukumilisela i-terminal ngolu hlobo lokufunda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Vivo Xplay7, iselfowuni yokuqala enomfundi weminwe phantsi kwesikrini
Le nkqubo yobukrelekrele iyakwazi ukwazi ukuba ucinga ntoni